Aghụghọ iji zere ịrịa n'oké osimiri | Akụkọ Njem
Maria | | Cruceros, Getaways, njem
Ọtụtụ mmadụ na-arafu echiche nke ịga njem ụgbọ mmiri n'oge ezumike ha. N’oge gara aga, ụgbọ mmiri nwere ike ịbụ ihe okomoko mana taa ha bụ nhọrọ ezumike dịka nke ọ bụla ọzọ ma dịịrị mmadụ niile. Tụkwasị na nke a, ha na-enye ohere nke ịga ọtụtụ ebe na-eme njem na ụgbọ mmiri jupụtara na nkasi obi yana ọtụtụ oge ezumike na oke osimiri.
Agbanyeghị, enwere ike ịmegharị anya n'ụgbọ nwere ike ịkụda ụfọdụ mmụọ ma laghachi azụ na atụmatụ ha. Ọ dịghị onye chọrọ icheta ezumike ha dị ka nro jupụtara na ọgbụgbọ na isi ọwụwa. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe gị, lee ọtụtụ aghụghọ iji zere ịrịa mmiri n'oké osimiri.
2 Ndị na-akwụ ụgwọ n'ụgbọ mmiri
3 Nri ụlọ
4 Pịa nkwojiaka
5 Rie apụl na-acha akwụkwọ ndụ
7 Anti-seasickness patch
8 Choo ihe omume
9 Nweta ikuku ọhụrụ
N’oge ụgbọ mmiri, a ga-eji biodramina belata oke mmiri. Ọ bụ ọgwụ nke na-ebelata mgbaàmà niile ma na-arụ ọrụ na 90% nke ikpe. Versiondị ọgwụ caffeinated nke ọgwụ a na-enyere gị aka ịme ka ị na-arụsi ọrụ ike dị ka onye a ma ama na-eme ka ụra na-atụ gị ma ọ nwere ike ime ka ụra, na-eduga na-efu ọtụtụ n'ime ihe ndị ị na-eme n'ụgbọ mmiri na-achọ isi na-ehi ụra n'ụlọ gị.
Ndị na-akwụ ụgwọ n'ụgbọ mmiri
Mgbe ị na-ahọrọ ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri, gbaa mbọ hụ na ọ nwere ndị na-egbochi mpịakọta, ya bụ, ka o nwere, nku abụọ ma ọ bụ anọ buru ibu nke na-agbasa n’okpuru ụgbọ ahụ ma na-eme ka njem ụgbọ ahụ ghara ịdị na-eme ka mmiri ghara ịda ada. Dị ka ọ na-adị, ụgbọ mmiri niile wuru mgbe afọ 2.000 tinyechara teknụzụ a, iji nyere ndị njem aka.
Teknụzụ ọzọ nke ụgbọ mmiri ọhụrụ ahụ jikọtara bụ nke na-egbochi ngbanwe nke ikuku na-akpata. A na-enweta nke a site na idei mmiri buru ibu n'akụkụ akụkụ nke ụgbọ mmiri ahụ nke na-abụghị ikuku.
Mgbe ị na-edozi ụlọ, ekwesịrị icheta na ị na-ama jijiji mgbe niile na njedebe karịa na etiti isi nke itule. N'ụzọ dị otú a, ụlọ ndị dị n'elu oche dị elu na-enwekarị ọtụtụ mmegharị karịa ụlọ ndị dị n'ime ime / etiti nke ụgbọ mmiri na n'ụsọ ala.
Otu aghụghọ megide oke ịrịa mmiri nke ndị ọrụ ụgbọ mmiri na-ejikarị eme ihe bụ ịpịpụta obere mpempe akwụkwọ ka nke chickpea iji debe ya n'etiti nkwojiaka na elekere, nke mere na ọ na-eji nwayọ na-agbanye veins gafere mpaghara ahụ. Obere nrụgide ahụ na-eme ka mgbaàmà nke dizziz dị mma. Echiche dabere na ihe ndị e ji acupuncture mee, nke ị nwere ike iji lụso ụfọdụ mgbaàmà ọgụ ma ọ bụrụ na a na-arụgide nrụgide n'ebe kwesịrị ekwesị n'ahụ. A na-ere ọla aka taa na-arụ otu ọrụ ahụ ma ọ ga-ekwe omume ịchọta ha ọbụlagodi n'ụgbọ mmiri ahụ.
Rie apụl na-acha akwụkwọ ndụ
Ọ bụ ọdịnala gbanyere mkpọrọgwụ n'etiti ndị ọrụ ụgbọ mmiri bụ ịlụso mgbaàmà ndị na-adịghị mma nke ịba mmiri ọgụ na apụl na-acha akwụkwọ ndụ. N'ezie, ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ndị ọrụ ụgbọ mmiri na-ekesa mkpụrụ osisi a n'etiti ndị njem mgbe ụgbọ mmiri ahụ ga-agabiga mpaghara nwere ọtụtụ agagharị ebe ọ na-ebelata ihe mgbaàmà ahụ nke ukwuu. Ọ bụrụ na ọ na-eju gị anya na ị na-ama jijiji n'oge njem a, nwalee aghụghọ a, ị ga - ahụkwa etu ị si edozi onwe gị.
Studies egosila na ụfọdụ mkpa mmanụ dị ka pepemint na lavender enyere jụụ ọgbụgbọ. O zuru ezu iji ume ọkụ nke ísì mmiri ole na ole wụsara na aka aka ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume isure ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'ime ụlọ ebe amachibidoro ya iwu.
Mgbawa mmiri na-ebute mmiri na-enwe otu nzube dịka biodramina mana ọ na-arụ ọrụ dị iche iche. Ihe nkedo a na-arapara na ogwe aka ma ọ bụ n'azụ ntị ma wepụta ogige nke na-ebelata mgbaàmà nke dizzzz. N'ịbụ onye na-eme ogologo oge, enwere ike iji ya ọtụtụ ụbọchị ma yabụ ị nwere ike izere ị takingụ ọgwụ ndị nwere ike imetụta afọ gị ma ọ bụrụ na ị nwere afọ ịchọghị. Enwere ike ịchọta patch ndị a na Office nke Front ụgbọ mmiri ma ọ bụ na ngalaba ahụike.
Ọ bụrụ na nju anya esighi ike, ihe dị mma bụ ịchọta ọrụ ga - enyere gị aka ịdọpụ uche gị na ahụ erughị ala. Ma ọ na-ekiri ihe ngosi, ngosi, ma ọ bụ ịnweta ikuku ọhụrụ. Mpaghara ime ụlọ, na-esote Office Office, bụkwa ebe dị mma iguzo ma ọ bụrụ na anyị achọpụta na ọ na-atụgharị.
Nweta ikuku ọhụrụ
Mgbe ụfọdụ, aghụghọ kachasị dị mfe bụ iku ume na ikuku nke ikuku mgbe ị na-elele anya na mmiri. Oge ezumike dị na mbara ihu gị ma ọ bụ na otu n'ime oghere mputa dị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Aghụghọ iji zere ịrịa n'oké osimiri
Ihe ị ga-ahụ na Zamora